सुत्नुभन्दा पहिले एक गिलास तातोपानी पिउने गर्नुहोस। केहि दिनमै देख्नुहुन्छ चमत्कार – Sanjal Nepal
Homeस्वास्थ्य /जिबनशैलीसुत्नुभन्दा पहिले एक गिलास तातोपानी पिउने गर्नुहोस। केहि दिनमै देख्नुहुन्छ चमत्कार
सुत्नुभन्दा पहिले एक गिलास तातोपानी पिउने गर्नुहोस। केहि दिनमै देख्नुहुन्छ चमत्कार
November 25, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 10947
स्व’स्थ रहनको लागि दिनभरीमा ८ देखि ९ गिलास पानी पि’उन आवश्यक छ । चिसो मौसममा हल्का मनता’तो पानी नै पिउनु फाइदाजनक हुने वि’शेषज्ञहरु बताउँछन् । पानी स्वा’स्थ्यको लागि निकै महत्वपूर्ण प’दार्थ हो । यसले श’रीरमा थुप्रै फाइदा पुर्याउँछ । विशेषगरी, ता’तोपानी रा’ति सुत्नुअघि पिउँदा निकै फाइदा पुग्ने वि’शेषज्ञहरु बताउँछन् । रा’तमा पा’चन प्र’क्रिया निकै तीव्र गतिमा हुने भएकाले सजिल्यै खाना प’चाउनको लागि रा’तिमा ता’तोपानी पिउन आवश्यक हुन्छ । यदि हरेक दिन सुत्नुअघि १ गिलास ता’तोपानी पिउँदा खानालाई प’चाउने, श’रीरमा फ्या’ट जम्मा हुन नदिने र तौ’ल घ’ट्न मद्दत गर्छ । यसका अन्य थुप्रै फाइदाहरु पनि छन् । ता’तोपानीले श’रीरको तापक्रम बढाउँछ । र प’सिना निकाल्ने गर्छ ।
जसले गर्दा र’क्तसञ्चार राम्रोसँग हुने र श’रीरको वि’षाक्त प’दार्थ फा’ल्ने काम गर्छ । ता’तोपानीले डि’प्रेशन र तनाव पनि कम गर्ने भएकाले रातिमा सुत्नुअघि पिउँदा राम्रोसँग नि’न्द्रा लाग्ने र फ्रे’स बनाउँन पनि मद्दत गर्छ । त्यतिमात्र होइन ता’तोपानीले हामीले खाएको खा’नेकुरामध्ये नचाहिने खानेकुरालाई घो’ल्ने काम गर्छ जसले गर्दा पा’चन प्रक्रिया सही ढंगले सञ्चालन हुन पाउँछ । र साथसाथै कब्जि’यत, ग्या’स्ट्रीक जस्ता सम’स्याहरु कम हुँदै जान्छ । त्यसैगरी, ता’तोपानीले र’गतलाई शुद्ध बनाउन गर्छ । जसले प्रा’कृतिक रुपमा नै र’गत पा’तलो बनाउने हुँदा को’लेस्ट्रोलमा पनि ता’तोपानी फाइदाजनक हुनछ । र’गतलाई राम्रोसँग घु’लाउने भएकाले ध’मनीहरुमा रगत ज’म्न नपाउने हुँदा हृ’दयघातको सम्भावना पनि कम हुन्छ । त्यतिमात्र होइन ता’तोपानीले थ’कान कम गराउने, छा’लामा चमक ल्याउने, उमेर कम देखाउने र क’पालको लागि पनि फाइदा गर्छ । रा’ति सुत्नुअघि ता’तोपानी एक गिलास पिउने गर्दा दिनभरीको थ’कान कम गर्ने र श’रीरका विभिन्न भाग दुखेमा पनि फाइदाजनक हुने हुन्छ । यसैगरी, राति तातोपानी पिउँदा एक्नि कम गर्ने, मु’सा आउने समस्या कम गर्ने, डन्डिफो’र आउन रोक्ने र छा’ला चम्किलो बनाउने गर्छ । छा’ला मात्र होइन ता’तोपानीले क’पाल बढ्न पनि मद्दत गर्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस। चना त हामी सबैले खाएकै छौं । चनाको छो’ले होस् अथवा चनाको दाल अथवा चनाको वे’सनबाट बनेका परिकार नै किन नहुन्, हामीले प्रायः खाइरहेकै हुन्छौं । तर, के तपाईंको डा’इटमा का’लो चना समावेश छ त ? हजुर, भि’टामिनहरुको ख’जाना हो का’लो चना । यो रे’सादार हुन्छ, भि’टामिनको साथै खनि’जहरुले भरिपूर्ण हुन्छ र यसमा चि’ल्लोपना कम मात्रामा हुन्छ । यसलाई डा’इटमा समावेश गर्नु तपाईंको स्वा’स्थ्यका लागि निकै नै फाइदाजनक सावित हुनेछ । का’लो चना खानाले क्लो’रोफिल, भि’टामिन बी, भिटा’मिन सी, भि’टामिन डी तथा भि’टामिने केका साथै फो’स्फोरस, पो’टासियम, ग्या’ग्नि’सियमको आवश्यकता पनि पूरा हुन्छ । यसबाहेक, यसको ग्ला’इसेमिक इ’न्डेक्स पनि कम हुन्छ । का’लो चनाले तपाईंले परफेक्ट ब’डी शे’प पाउन सक्नुहुनेछ । का’लो चनाको नियमित सेवनले म’धुमेहमा निय’न्त्रण आउनुका साथै श’रीर समेत म’जबुत हुनेछ । का’लो च’नालाई तपाईंले श’ख्खरसँग खानुभयो भने अझै बढी फा’इदाजनक हुनेछ । का’लो चनाले हाम्रो श’रीरमा उर्जा मिल्छ । खासगरी जाडो मौसममा मानिसहरु श’ख्खरसँग का’लो चना खाने गर्छन् ।
का’लो चना फाइ’बरले भरिपूर्ण हुन्छ । यसले पा’चन प्र’कृयालाई दुरुस्त गर्छ । राति पानीमा चना भि’जाएर राख्नु पर्छ र बिहान त्यसलाई खानुपर्छ । त्यसो गर्नाले तपाईंलाई निकै नै फाइदा पुग्नेछ । क’ब्जियतको स’मस्या पनि टाढा हुन्छ । साथै जुन पानीमा चनालाई भिजाइएको हुन्छ । त्यो पानी समेत स्वा’स्थका लागि फाइदाजनक हुन्छ । का’लो चना एन्टि’अक्सिडेन्ट, एन्थो’साइनिन, फाइ’टोन्यूटि्रयन्ट्स तथा ए’एलएले भरिपूर्ण हुन्छ । त्यसले मु’टुको बि’रामीहरुलाई टाढा राख्नुका साथै र’क्त न’लीहरुलाई स्व’स्थ राख्नमा फाइदाजनक हुन्छ । साथै यसलाई फो’लेट तथा म्या’ग्नेसियमको पनि राम्रो स्रोत मानिन्छ । जुन हा’र्ट ए’ट्याक तथा स्ट्रो’कको ख’तरालाई कम गर्नमा समेत सहयोगी मानिन्छ । म’धुमेहका रो’गीहरुका लागि का’लो च’नाको सेवन गर्नु निकै नै फाइदाजनक मानिन्छ । यसमा भएको का’र्बोहाइड्रेट बिस्तारै पच्छ । जसका कारण ब्ल’ड सु’गरको स्त’रलाई कम गर्न सकिन्छ । त्यसैले, यसले इन्सु’लिन प्रति’रोधमा योगदान दिनसक्छ र टाइप २ म’धुमेहको ख’तरालाई पनि स’माप्त गर्नसक्छ । का’लो च’नामा घु’लनशील फा’इबर हुनाले यो को’लेस्ट्रोलको लेभललाई कम गर्न समेत स’क्षम हुन्छ ।ग’र्भवती तथा स्त’नपान गर्ने महि’लाहरुका लागि का’लो चना निकै नै फाइदाजनक हुन्छ । किनभने यसमा प्र’चुरमात्रामा आइ’रन हुन्छ । यसबाहेक यसले एनि’मियालाई रोक्न समेत सहयोग पुर्‍याउँछ । बढ्दो उमेरका बालबालिकालाई पनि यो निकै फा’इदाजनक हुन्छ ।का’लो चनामा फो’लेट्स, आ’हार फा’इबर, प्रो’टीन, का’र्बोहाइड्रेट, क’पर, आ’इरन तथा फो’स्फोरस पाउन सकिन्छ, जसले छा’लालाई फाइदा पुर्‍याउँछ । चना भिजाइएको पानीले अनु’हार धोयो भने अनु’हारमा चमक आउँछ ।**
आफ्नो साइकलले किचेको चल्ला र पैसा बोकेर एक बालक अस्पताल पुगेपछि…विश्वभर बन्यो भाइरल
यस्ता खानाको कारण अनुहारमा डंडीफोर आउन सक्छ हेर्नुहोस के के हुन ती खाना ?
December 22, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 3542
काठमाडौँ । धेरै युवायुवतीहरु डन्डीफोरको समस्याले पीडित हुने गरेका छन्। डन्डीफोर छालामा हुने एक प्रकारको रोग हो भन्ने कुरा नबुझ्दा र डन्डीफोर निको पार्ने भन्दै विभिन्न घरेलु उपाय अपनाउँदा धेरैले अनुहारको सुन्दरता गुमाउँछन्। मानिसको शरीरमा
छिट्टै बिर्सने बानी छ ? तुरून्त खानुहोस् यी १० खानेकुरा
December 22, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 2456
के तपाइँमा छिट्टै बिर्सिहाल्ने बानी छ ? वैज्ञानिकहरुले यस्तो धेरै भुल्ने समस्याको कारण खास पौष्टिक तत्वको कमी रहेको बताउँदै आएका छन्। यसबारे हामी केहि जाकारी दिदै छाैँ । दालचिनी, मरिच चिया, कफी तथा बेसारः बेसार,
महिलाहरुले बिहे अघि शा:री:रिक स:म्बन्ध राखे नराखेको कसरी थाहा पाउने ? प’ढ्:नुहोस यी टिप्सहरु !
February 5, 2021 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 8046
बिहेपछि महिलाको जीवनमा धेरै प’रिवर्तन आउने गर्छ । उनीहरुको बोली चाली देखि श:रीरमा पनि परिवर्तन देखिन्छ । केटाहरुलाइ जा;न्ने जि’ज्ञा;सा नै यहि हो, हेर्नुस यस्तो छ का:रण शरीरका यी अं’ग:हरुमा पटक पटक हात लगाउने बानी
LEX 18 agenda conversation: Job club (486298)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (458407)
Hello world! (384416)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (351929)
dole traces grow as seasonal jobs dry up (121794)